MYU SHADAN: March 2014
Myu Shadan Blog hta sa du ai manang ni e
Myu Shadan Blog hta sa du sa chyai ai manang nie, ngai Myu Shadan internet nlu lang ai shara de naw hkawm taw nga ai majaw Blog hpe atsawm garai nlu shakyi shi na re hpe ndau dat nngai . A ten bai lu ai shaloi she grai kaja hkra ,shang hti ai waamatu lama mi akyu rawng hkra bai shakut mara mat wa na ga ai law . Sa du ai ni yawng hpe mung grai chyeju kaba sai law .
Posted by myu shadan at 1:13 PM No comments:
ရွှေအိုရောင် Batter Saver လှလှလေး - Deep Sleep Battery Saver Pro v2.2 APK
Battery Saver ကတော့ Android Phone တိုင်းမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Deep Sleep Battery Saver Pro ကလည်း အခြား Battery Saver တွေလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ချက်အတူတူပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာ ကွာလည်းဆိုရင် သူ့ရဲ့ Notification လေးနဲ့ စတိုင်လေးတွေက အတော်လေးကိုလန်းပါတယ် ရွှေအိုရောင် ပုံစံလေးတွေနဲ့ပါ။ အောက် မှာနမူနာ Screen Shot တွေတင်ပေးထားပါတယ်။ File Size ကလည်း 1.5MB ဘဲ ရှိပါတယ်။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by myu shadan at 1:07 PM No comments:
Windos OS Version များနှင့် ဗဟုသုတများ
Posted by rain jasmin
ဒီစာလေးတွေကို မမိုးမှတ်စုထဲမှာ မှတ်ထားတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ online ပေါ်ကရထားတာပါပဲ။ အနည်းငယ်ဆီလျော်သလို ပြုပြင်ပြီး လိုအပ်သည်များကို google မှ ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပြီး ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
- လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Windows XP Professional Edition and Windows Home Edition
- Windows XP Tablet Edition ဆိုပြီး (၅)မျိုးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိပ်ကိုတော့ Windows7ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေမှာပဲ ဖော်ပြပေးပါမယ်။
Windows76 Editions
Aero user interface, DVD Playback, Window Media Center, Internet Connection Sharing စသော လုပ်ဆောင်ချက်များ မပါဝင်ပါ။
Encryption File System (EFS), Applocker, Direct-Access, Bitlocker, Remote Desktop Host, Branch-Cache စသော Enterprise Feature များလဲ မပါဝင်ပါ။
Windows XP တွင်ပါဝင်သော IIS Web Server ကိုလဲ သုံးမရနိုင်ပါ။ အများအားဖြင့် IIS Feature ကို Window Server Version တွေမှာသာ အသုံးအများဆုံးပါ။ Windows7တွင် Professional, Enterprise, Ultimate စသော Editions များတွင် ပါဝင်ပြီး Web Developer များ အသုံးအများဆုံးပါပဲ။
CPU တလုံးသာခွင့်ပြုထားပြီး core ကို unlimited ခွင့်ပြုထားပါသည်။
Windows7Editions အားလုံးသည် Dual Core, Quad Core, ... အားလုံးကို support လုပ်ပါသည်။
2. Windows7Home Basic
Emerging Market Country (ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသည်)
Domain System join ၍ မရနိုင်ပါ။
Enterprise Feature တွေဖြစ်တဲ့ Encryption File System (EFS), Applocker, Direct-Access, Bitlocker, Remote Desktop Host, Branch-Cache စတာတွေကိုလဲ မရနိုင်ပါဘူး။ IIS Web Server ကိုလဲ သုံး၍ မရနိုင်ပါ။
Physical Processor (CPU) တလုံးသာ ခွင့်ပြုထားပြီး 32bit Version တွင် Memory 4GB အထိ သုံးနိုင်ပါသည်။ 64bit Version တွင် Memory 8GB အထိ သုံးနိုင်ပါသည်။
Encryption File System (EFS), Applocker, Direct-Access, Bitlocker, Remote Desktop Host, Branch-Cache စသော Enterprise Feature များပါဝင်ပါသည်။
IIS Web Server Feature ပါဝင်ပါတယ်။
Domain System များ မ join နိုင်ပါ။
Enterprise Feature တွေဖြစ်တဲ့ Encryption File System (EFS), Applocker, Direct-Access, Bitlocker, Remote Desktop Host, Branch-Cache စတာတွေကိုလဲ မရနိုင်ပါဘူး။
32bit version တွင် Memory 4GB အထိ support လုပ်ပြီး 64bit version တွင် Memory 16GB အထိ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
Physical Processors ၂လုံးအထိ support လုပ်ပါတယ်။
4. Windows7Professional Editions
Windows7Home Premium Edition မှ Feature များအားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။
Domain System ကိုလဲ join နိုင်ပါတယ်။
Encryption File System (EFS), Applocker, Direct-Access, Bitlocker, Remote Desktop Host, Branch-Cache စတာတွေကိုလဲ ရနိုင်ပါတယ်။
Enterprise Feature တွေဖြစ်တဲ့ Encryption File System (EFS), Applocker, Direct-Access, Bitlocker, Remote Desktop Host, Branch-Cache စတာတွေကိုတော့ မရနိုင်ပါဘူး။
Physical Processor 2လုံးအထိ support လုပ်ပါတယ်။
5. Windows7Enterprise Editions
6. Windosws7Ultimate Editions
ဒီ(၂)ခုက တူနေလို့ ပေါင်းပြီး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်...
Enterprise Edition ကို Microsoft's Volume Licensing Customer တွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားပေးတာပါ။
Enterprise နဲ့ Ultimate Editions တွေမှာ အခြားEditions တွေမှာ မရနိုင်တဲ့ Feature တွေတင်မကပါဘူး။ Enterprise Feature တွေဖြစ်တဲ့ Encryption File System (EFS), Applocker, Direct-Access, Bitlocker, Remote Desktop Host, Branch-Cache အပြင် Boot from VHD ကိုပါရနိုင်ပါတယ်။
Physical Processor2လုံးအထိ support လုပ်ပါတယ်။
Note : MCTs (Windows 7, 70-680) ဖြေမယ့်သူများကတော့ 7-680 မှာ Test မေးတဲ့ Feature အများဆုံးကတော့ Enterprise နဲ့ Ultimate Edition တွေမို့ အဓိကထားပြီး လေ့လာစေချင်ပါတယ်။
မူရင်း ပို့စ်ကို google reference တွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပေးတာပါရှင်။ ဗဟုသုတ အနည်းငယ်ရသွားမယ်ဆိုရင် မမိုးကြိုးစားရကြိုး နပ်ပါတယ်။
Posted by myu shadan at 1:05 PM No comments:
★★Adobe Premiere Pro CS6 6.0.0 LS7 Multilanguage + Crack (Full Version)★★
Posted by ရန်ကုန်သား
Adobe Premiere Pro CS6 ကိုတောင်းဆိုထားကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Full Version ဖြစ်အောင် Crack ဖိုင်လေးပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။၀င်းဒိုး 32/64 bit အားးလုံးအသုံး
ပြုနိုင်ပါတယ်။မိမိဝင်းဒိုး bit ကိုရွေးပြီး Crack ဖိုင်ထဲက dll ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲ
Languages : English, French, Italian, German, Spanish, Portoguese (BR), Japanese, Korean
အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို (တစ်နေ့မှ) တစ်ကြိမ်လောက်သာ ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။
မှတ်ချက်။ ။ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲပြီးသောဖိုင်များကို Part 1 ဆိုလျှင်ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ Part 1 ဟု
နာမည်ပြောင်းပေးပါ။ပြီးမှဖိုင်ဖြည်ပါ။ဖိုင်ဖြည်နည်းမသိပါက ဒီမှာနှိပ်ပြီး အရင်ဝင်ကြည့်ပါ။
Posted by myu shadan at 1:03 PM No comments:
★★ Next Base 3D Livewallpaper LWP Version : 1.03 Apk (All Android) 6Mb ★★
Next Base 3D livewallpaper အလန်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။screen မှာ sliding လည်းရပါ တယ်။(Click ‘Menu’)—>Wallpaper—> Next live wallpaper—>Next Base ကနေသွားရောက်ရွေး
ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ‘Next Launcher’ ကိုအရင်အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ ‘live wallpaper’ ကနေကိုယ့်စိတ်
ကြိုက်ခေါ်ယူရုံပါပဲ။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 6Mb ပဲရှိပါတယ်။Android : 2.2 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတရ်
Next Base 3D livewallpaper, designed for Next Launcher 3D specially, is released now. Its major features include:
Base will move while you are sliding on the screen
Base will be pulled into or pushed away when you are pressing
General:Long press homescreen—>Wallpaper—>Live wallpaper—>Next Base
With Next Launcher:Long press homescreen(Click ‘Menu’)—>Wallpaper—> Next live wallpaper—>Next Base
Get the full version of Next core live wallpaper, search and install ‘Next Launcher’ in Google Play.
Not all handsets support the live wallpaper feature, please check fora‘live wallpaper’ category as the directions above state.
Posted by myu shadan at 1:02 PM No comments:
★★WeVideo – Video Editor & Maker Version : 2.0.117 Apk (3Mb)★★
မိမိဖုန်းကနေ photos တွေကို Add effects တွေနဲ့ movies or slideshows လုပ်ချင်သူတွေအတွက်
Full Version လေးဖြစ်တဲ့ WeVideo – Video Editor & Maker လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်
ရိုက် share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 3.8M ပဲရှိပြီး Android : 4.1 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြု
The WeVideo Video Editor & Maker helps you capture moments and edit them on-the-go. Create amazing movies, photo-stories and slideshows. Share them on your favorite social networks.
. Use photos and videos from your gallery or capture from the app
. Trim and arrange your clips to tellastory
. Add effects to your movies or slideshows with our selection of Themes
. Write titles and captions
. Select your own music and adjust the volume
. Publish in HD, save completed videos to the gallery, and share them to social channels including Facebook & YouTube
. Easy to use! Great app for users new to video editing
. Easy as pie! Works likeadream! Super easy to use, and quite flexible!
. Wonderful program worthy 50,000 ?
. Best video editor I’ve used
. Amazing! Easy to use, loads of effects! And its free!
. One of the best video editing apps I’ve used on my phone. Definitelyamust have
. Fast. Best on the market
. Fantastic! Just the app I was looking for. I love it. Thank you 1,000,000 times
Content created with WeVideo Video Editor & Maker for Android syncs with the cloud and can be edited with full creative control with the WeVideo.com editor. All your videos and projects are stored online, safely, for you to edit wherever you are. Whether on the phone, tablet or computer, with WeVideo you can create your slideshows, movies, commercials, vlogs, trailers, how-to videos, and much more.
Download WeVideo for FREE today!
Current Version : 2.0.117
Posted by myu shadan at 1:00 PM No comments:
ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး ကမ်းလှမ်းထားမှု မရှိ
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး အတွက် ကချင် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကို သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ အခြေအနေ အထိ ဘယ်အဖွဲ့မှ လာ မကမ်းလှမ်းဘူး၊ ကောက်ဖို့ကလည်း အခက်အခဲတွေ များတယ်”ဟု ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO) ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးလနန်က ပြောသည်။
လက်ရှိ အချိန်၌ ဒုက္ခသည် စခန်း အတွင်း လူဦးရေစာရင်း အတိအကျ ကောက်ယူထားသော်လည်း၊ စစ်ပြေး ဒုက္ခ သည် များတွင် မှတ်ပုံတင်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ မရှိသဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး ခက်ခဲမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးလနန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အစိုးရ၏ ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်း ကြားစာ ရောက်လာသော်လည်း ဥပဒေ ဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဆို သည့် အသုံးအနှုန်း ပါရှိသည်ကို သဘောမတွေ့သည့် အတွက် မတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကချင်စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည် စခန်း ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဒွဲပီဆာကလည်း“သန်းခေါင်စာရင်း ကိစ္စကတော့ သူတို့ ဘာမှလည်း မပြောဘူး၊ ကျနော်တို့လည်း ဘာမှ မသိသေး ဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကချင်စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည် စခန်း ကော်မတီက တာဝန်ယူသည့် စခန်း စုစုပေါင်း ၂၂ ခု ရှိပြီး ဒုက္ခသည် စခန်း ၄ ခုနှင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ဦးရေ ၅ သောင်းကျော် ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိ ဒုက္ခသည်များ ဦးရေ စာရင်းကို ကောက်ယူ ထားသော် လည်း သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မသိရှိရသေးကြောင်း ဦးဒွဲပီဆာက ဆက်ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ စခန်းမှာ လူဦးရေ ၄၄၄၀ ရှိတယ်၊ ဒီမှာက မှတ်ပုံတင်တွေ မရှိတဲ့ အတွက် အခက်အခဲ များစွာရှိတယ်၊ သန်းခေါင်စာရင်း ကိစ္စကတော့ ဘာမှ မသိရသေးဘူး၊ ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ စာရင်းတွေ ကောက်ထားတာ ရှိပါ တယ်”ဟု ဝမ်ချိုင်း ဒုက္ခသည် စခန်း တာဝန်ခံ ဦးဇော်မှိုင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခံချင်းကို မတ်လ ၃၀ ရက်မှ ဧပြီလ ၁၂ရက် အထိ ကောက်ခံ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ကောက်ယူရာတွင် လက်ရှိ စစ်ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် နယ်မြေ နှင့် ၅ ကီလို အကွာ အထိ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခံရေး ကော်မတီက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီး ဌာန ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီတို့ မတ်လ ၁ ရက်က နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 12:49 PM No comments:
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစိုးရ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မတီက အစိုးရအနေဖြင့် လွှတ် တော်တွင် အကောင်အထည် ဖော်ပေးမည်ဟု အာမခံ ကတိပြုထားသည့် အချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပျက်ကွက်လျက် ရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် စတင်ခဲ့သော လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ အစိုးရက အကောင် အထည်ဖော်မည်ဟု ကတိပြုထားသော အာမခံချက်များ၊ ကတိများ ၊ တာဝန်ခံချက်များ အနက် တချို့ကိစ္စရပ်များမှာ ယနေ့ အချိန်အထိ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးဘဲ ပျက်ကွက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ယင်း ကော်မတီ၏ မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရက ကတိပြုထားသော အာမခံချက်များကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ / မရှိ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း၊ သွားရောက် စစ်ဆေးခြင်း၊ လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစိုးရ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းစိန်က လွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် တတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဟောင်းနွမ်း စုတ်ပြတ်နေသော ဘတ်စ်ကားများ အစား အဲယားကွန်းပါသော သက်သောင့်သက်သာ ရှိစေမည့် ဘတ်စ်ကားများ အစားထိုး ပြေးဆွဲပေးရန် အစိုးရသို့ မေးခွန်းမေးမြန်း ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဆိုသည့် ကတိမှာ ယနေ့အချိန်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွှန့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ပထမအကြိမ်က အဋ္ဌမ အကြိမ်အထိ တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုများ အနက် အဆို ၇၇ ခု အတည်ပြုခဲ့ ပါတယ်၊ အတည်ပြုတဲ့ အဆို တွေထဲမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးတာ ၅၅ ခု၊ လုပ်ငန်းလက်ကျန် ၂၂ ခု ရှိပါတယ်၊ ၂၂ ခုထဲမှာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မှာ ဆောင်ရွက်ပေးမှာက တခု ဖြစ်ပါတယ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ကျမှ ဆောင်ရွက်ပေးမှာက ၂၁ ခု ကျန်ရှိနေပါတယ်”ဟု အဆိုပါ ကော်မတီတီ၏ အတွင်းရေး မှူး ဦးသန်းမြင့်ကလည်း ပြောပြသည်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တလျှောက်လုံး ယခင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ အနက် လုံးဝ ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ ၁၁ ခု၊ ယခင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေကို ပြန်လည် ရေးဆွဲသည့် ဥပဒေ ၂၂ ခု၊ တည်ဆဲ ဥပဒေများကို အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲသည့် ဥပဒေ ၃၀၊ ပထမ အကြိမ်မှ န၀မ အကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေး အထိ အသစ်ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဥပဒေ ၁၄ ခု၊ ဘတ်ဂျက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင် သည့် ဥပဒေ ၇ ခု၊ စုစုပေါင်း ဥပဒေ ၈၄ ခု အား ရုပ်သိမ်း၊ ပြင်ဆင် ၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ကို လွှတ်တော် နှစ်ရပ် က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by myu shadan at 12:47 PM No comments:
★★ Next Base 3D Livewallpaper LWP Version : 1.03 A...
★★WeVideo – Video Editor & Maker Version : 2.0.117...